रुकुमकी मनकला खत्रीको हत्या १५ वर्षीय उनकै भतिजाबाट – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured रुकुमकी मनकला खत्रीको हत्या १५ वर्षीय उनकै भतिजाबाट
रुकुमकी मनकला खत्रीको हत्या १५ वर्षीय उनकै भतिजाबाट
जिल्ला रुकुम पश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित गोठमा चौपायालाई घाँसपात गर्न गएकी २६ वर्षीया मनकला खत्री खड्काको साउन ११ गते राति मकैबारीमा शव फेला परेको थियो।
मनकलाको घर वडा नं. ४ र गोठ वडा नं. ३ मा पर्छ। घरदेखि लगभग २०-३० मिटरको दुरी। मनकला घरमा ६ वर्षीय छोरा र सासु आमासँग बस्दै आएकी थिइन्।
मनकलाको श्रीमान वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन्। मनकला उक्त दिन पनि सासुआमालाई छोराको जिम्मा लगाई गोठमा भैंसीलाई घाँस हाल्न भनेर बेलुका करिब ७ बजेतिर घरबाट गएकी थिइन्।
तर, उनी राति अबेरसम्म पनि घर नआएपछि सासुआमा र छोरा आत्तिए। सासुआमाले आफन्त र छरछिमेकलाई खबर गरिन्।
सबै मिलेर गोठ भएको ठाउँतिर खोजी गर्न गए। मकैबारीमा मनकलाको हत्या भएको अवस्थामा शव देखेपछि सबैको होस हवास उड्यो।
अनि उनीहरूले मनकलाको हत्याको खबर प्रहरीलाई दिए। प्रहरीले राति साढे ११ बजेतिर मनकलाको हत्याबारे खबर प्राप्त गरेको बताउँछ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी ध्रुवकुमार श्रेष्ठका अनुसार मनकलाको शव गोठनजिकै गणेशबहादुर खड्काको मकैबारीमा हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको थियो।
प्रहरीले रातभर त्यहीँ बसेर शवको सुरक्षा गर्‍यो। सुर्खेत र बाँकेको कोहलपुरबाट प्रहरीले घटना अनुसन्धानका लागि भनेर तालिम प्राप्त कुकुर ल्याएको थियो। दिउँसो अबेर एउटा कुकुर कोहलपुरबाट रुकुम पुर्‍याइयो। त्यो दिन पानी परेको थियो। त्यसका साथै घटनास्थलमा मानिसको आउजाउ बाक्लै भइसकेको थियो। त्यसैले, कुकुर अमलियो। कुकुर घटनास्थल नजिककै घुमिरह्यो। नजिकैको खोला डिलमा गएर बसिरह्यो।
त्यसपछि प्रहरीले मुचुल्का तयार पारी मनकलाको शव उठायो। पोष्टमार्टमाका लागि अस्पताल लगियो। मनकलाको कञ्चट लगायत ठाउँ-ठाउँमा गहिरो चोट लागेकाले हत्या हो भन्नेमा प्रहरी ढुक्क थियो।
गणेशबहादुर खड्का मनकलाका जेठा जेठाजु हुन्। उनले आफ्नो मकैबारीमा मनकलाको शव हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको हुँदा साउन १३ गते प्रहरीमा पुगेर घटना अनुसन्धान गरिदिन भनेर प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए।
त्यसपछि प्रहरी मनकलाको घरमा पुग्यो। प्रहरीले त्यहाँ स्टिलको एउटा हाते टर्च (लाइट) फेला पार्‍यो। त्यो देखेर घर परिवारका मानिसहरू छक्क परेका थिए, कसरी त्यो टर्च मनकलाको कोठामा आइपुग्यो?
त्यो उनीरूको थिएन। सोधपुछका क्रममा प्रहरीले त्यो लाइट मनकलाका माइला जेठाजुको १५ वर्षीय छोराले प्रयोग गर्दै आएको तथ्य फेला पार्‍यो। मनकला साइँलाकी श्रीमती हुन्।
दाजुभाइको घर नजिकै थियो। टर्चका आधारमा प्रहरी मनकलाका माइला जुठाजुको घरमा पुग्यो।
घर तलासी गर्ने क्रममा एउटा खोपामा प्रहरीले मनकलाको नाक-कानका सुनका गरगहना फेला पार्‍यो। त्यो कोठा मनकलाको हत्यामा संलग्न तिनै १५ वर्षीय किशोरको भएको घर परिवारले पुष्टि गरे। त्यसैका आधारमा प्रहरीले ती किशोरलाई आशंका लागेर पक्राउ गर्‍यो।
उनले घटनामा आफ्नो संलग्नता सहजै स्वीकार गरे।
हत्याको कारण ‘रिसिइबी’
एकै घरका दाजुभाइ भएका कारण अंशबण्डापछि जग्गा जमिन सँगै हुने नै भयो। मनकलाको गोठ भएको स्थानमा पनि उनका माइला र जेठा जेठाजु लगायतको जग्गा जमिन छ।
घटना भएको दिन मनकलाका जेठाजुका दुई छोराहरू १५ वर्षीय र ११ वर्षीय दिनभर जसो मनकलाको गोठ भएको जग्गा नजिकै आफ्नो जग्गामा काम गरिरहेका थिए।
मनकला र उनका जेठाजुका १५ वर्षीय छोराका बीचमा उति राम्रो बोलचाल पनि थिएन। ती १५ वर्षीय भतिजले मनकलाको घरबाट नगद रुपैयाँ चोरी गरेका थिए। मनकलाले उनलाई ‘चोर’ भन्ने गर्थिन्। प्रहरीका अनुसार माइला जेठाजुको भन्दा मनकलाको घरको आर्थिक अवस्था मजबुत भएको हुँदा उनका भतिजाले पटक-पटक उनको घरबाट चोरी गर्ने गरेका थिए।
मनकलाले ‘चोर’ भन्ने गरेको हुँदा भतिज ‘इगो’ पालेर बसेका थिए।
घटना भएको दिन मनकला गोठतर्फ जाने क्रममा उनका दुई भतिजले काटेर बाटोमा थुपारेको घाँस नाघेर हिँडिन्।
‘हत्या अरोपित किशोरका अनुसार धर्मभिरु र पहाडी समाजमा अझै पनि महिलाले घाँस वा पानी नाघ्नु भनेको राम्रो मान्ने गरिँदो रहेनछ,’ डिएसपी श्रेष्ठले भने, ‘आन्टीले आफूले काटेको घाँस नाघेर गएपछि आवेगमा आएर खुर्पाले पछाडिबाट प्रहार गरेको देखिन आएको छ।’
सरासर हिँडिरहेकी मनकलामाथि पछाडिबाट एक्कासी कञ्चटनमा खुर्पा प्रहार भएपछि उनी धर्मराउँदै लडिन्। त्यसैमाथि उनले थप ५-६ पटक खुर्पाले आक्रमण गरे।
मनकला अचेत बनिन्। त्यसपछि उनले मनकलाको नाक, कानमा भएका सुनका गहना समेत निकालेर लगे। प्रहरीले ती किशोरले आफू सुत्ने कोठाको खोपामा लुकाइराखेको गरगहना बरामद गरेको छ।
घटना अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक रामबहादुर कटवालले मनकलाको हत्यापछि उनका १५ वर्षीय भतिज फेरि पनि उनको कोठामा चोरी गर्न भनेर गएको खुल्न आएको बताए।
‘आन्टीको हत्यापछि सोही दिन राति फेरि पनि उनी कोठामा चोरी गर्न गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अरुको आवाज सुनेपछि उनी आत्तिएर भाग्ने क्रममा आफ्नो टर्च समेत कोठामा भुलेर गएको पुष्टि भएको छ।’
बुटवलमा एकैसाथ १ लाख जना अट्ने खुलामञ्चको गुरुयोजना तयार
सैनामैनाका २३ विपन्न विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान
२२ सेकेन्डs अघि
आज ओलीले बुटवलमा जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्ने‍
प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य